BURMA: Online News & Analysis: August 2010
ကက်ဆီကွန်ဘဏ် နှင့် မြန်မာဘာသာသုံး အေတီအမ်စက်
"Innovation is more important in Banking business"
KBank has already provided Burmese language for ATM Machine in order to serve Burmese customers in Samutsakorn province.
Only KBank developped this language.
မနေ့က ထိုင်းနိုင်ငံက ထိုင်းအမျိုးသမီး မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ၀မ်းသာအားရနဲ့ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ လေး အကောင်အထည်ပေါ်လာပါပြီတဲ့။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေးက ကျနော့်ရဲ့ စိတ်ကူးလေးတစ်ခုဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ တခါတရံ လူ့ရဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေ အကောင်အထည်ဖော် လာဖို့ အချိန်တွေ၊ ရုပ်ဝတ္တုတွေ၊ ငွေကြေးတွေ၊ နည်းပညာတွေ၊ ရင်းနှီးမှုတွေ ပေးဆပ် ကြရတက်ပေမဲ့၊ ဘာ ရင်းနှီးမှုတွေမှ မပါပဲ ကျနော့်ရဲ့ စိတ်ကူးလေး လက်တွေ့ဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရတော့မယ်။ ၀မ်းသာမိတာတော့အမှန်ပါပဲ။ အဲဒီ စိတ်ကူးလေးကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ မြန်မာဘာသာသုံး အေတီအမ်စက် ဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေသွင်းခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်းများ အလွယ်တကူ အသုံးပြုလာ နိုင်ပါပြီ ဆိုတာပါပဲ။
သူမကို ကျနော်လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်ကျော်က ရင်းနှီးသိကျွမ်း ခဲ့တယ်။ သူမဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ KBank ဘဏ် ခေါ် ကက်ဆီကွန်ဘဏ် ရုံးချုပ်က ဘဏ် မန်နေဂျာတယောက် အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးပါ။ သူမဟာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၃၀ ကျော်သာ ရှိပေမဲ့ ကက်ဆီကွန်ဘဏ် မှာ ဘတ်ငွေ ၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန် ဒေါ်လာခန့်မှန်း ၁၈၁ သန်းလောက်) ကုန်ကျမည့် ဘဏ် ထိန်းသိမ်းရေးစနစ် တခုလုံးကို အသစ်ပြောင်းလဲဖို့ တာဝန်ယူထားရသူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ဘက် အခြားဘဏ်တွေ ကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသစ် တွေကို တိုးချဲ့ ဖို့ ဘဏ်ထိမ်းသိမ်းရေးစံနစ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ရန် လေးနှစ်လောက် အချိန် ကြာမယ်လို့ သူမ ကျနော့်ကို ပြောပြခဲ့ဘူးတယ်။ ကျနော်ကလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံ အင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ် မှာ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှု ဘာသာကို တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့စဉ်က “အင်တာနက် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း” ဆိုတဲ့စာတမ်းကို သုတေသနပြု ခဲ့ရတာမို့ သူမနဲ့ ကျနော်အကြား ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများနဲ့ ပက်သက်သည့် အကြောင်းအရာများ ကို မကြာခဏဆိုသလို ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
ကျနော် မနှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားရောက်လည်ပတ်စဉ်က သူမဟာ သူမရဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်များ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့ သူတို့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကက်ဆီကွန်ဘဏ် ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ အပေါ် တရင်းတနှီးဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တယ်။ သူတို့ အားလုံးဟာ အသက် ၃၀ -၄၀ ပတ်ဝန်းကျင် လူငယ်များဖြစ်ပြီး၊ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဘွဲ့ရလာခဲ့သူတွေဖြစ်လို့ အကျိုးရှိတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ခဲ့သလို သူတို့ရဲ့ အတွေးခေါ်တွေအပေါ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း အများကြီးလေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာ အာရှလမ်းမကြီး နှင့်အတူ ထိုင်း-မြန်မာ ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်လာနေမှု၊ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း သန်းနဲ့ချီသောမြန်မာများ နေထိုင်နေမှု ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်ဘာသာ ငွေသွင်းထုတ်ယူနိုင်သည့် အေတီအမ်စက်များ အသုံးပြုကာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ သင့်ကြောင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ ၀န်ဆောင်မှုဟာ အကုန်အကျသက်သာပြီး ဘဏ်မှာ ငွေအပ်သူတွေ များလာနိုင်မဲ့ ၀န်ဆောင်မှု နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။
ထိုစဉ်က ကက်ဆီကွန်ဘဏ် ဟာ ပြိုင်ဖက်အခြား ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ ဆီယမ် ကော်မာရှယ် ဘဏ် (Siam Commercial Bank)၊ ဘန်ကောက်ဘဏ်( Bangkok Bank) တွေလို ဘဏ်ခွဲတွေ ထပ်မံ တိုးချဲ့ပြီးဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ မပြုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီး၊ ရင်နှီးမြုပ်နှံမှုငွေကြေး ကုန်ကျမှု သက်သာတဲ့ အခမဲ့မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ ကို တိုးချဲ့တဲ့ စီးပွားရေးနည်းလမ်းသစ်တွေ ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကျိုးစားနေတဲ့ အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်း (SME) တွေကို ငွေထုတ်ချေးတဲ့ဘက်၊ ဘဏ်မှာ ငွေအပ်သူတွေ ဘယ်လိုများလာအောင် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို တိုးချဲ့ဖို့ဘက် အထူးပြုစဉ်းစားနေတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကက်ဆီကွန်ဘဏ် မှာ ငွေအပ်တဲ့သူတွေ ကို အခမဲ့ ဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင် ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု တွေကို ဆောင်ကြဉ်းပေး နေပါတယ်။ ကက်ဆီကွန်ဘဏ် ဟာ တရုတ်၊စင်္ကာပူ၊ဂျပန်၊ အမေရိကန်နဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ဘဏ်ခွဲများရှိနေတာကြောင့် ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့ရာမှာ ဘဏ် ထိန်းသိမ်းရေးစနစ် တခုလုံးကို အသစ်ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်နေတဲ့အချိန် ဖြစ်တယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ ကက်ဆီကွန်ဘဏ် ဟာ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေထဲမှာ စတုတ္တ အကြီးဆုံး ဘဏ်ကြီးတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့စီးပွား ဆုတ်ယုတ်နေမှု ကာလအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေဟာ ဘဏ် ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး အတွက် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ တိုးတက်လာဖို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ တိုးချဲ့မှုတွေကို ပြုလုပ်နေကြရတယ်။
ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်လာရာမှာ မနေ့က ကေဘဏ်က ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း မှာ သန်းနဲ့ချီ နေထိုင်နေကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက် ဘဏ်မှာအပ်နှံမှု၊ ထုတ်ယူမှုတွေမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေလာအောင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားတဲ့ အေတီအမ် စက်တွေကို စတင်အသုံးပြုပြီး ၀န်ဆောင်မှုတွေတိုးချဲ့ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါပြီ။ ကေ ဘဏ်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပထမ ဦးဆုံး မြန်မာဘာသာဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ဘဏ်တစ်ခုအဖြစ် အခြားဘဏ်တွေရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကို စတင်စိန်ခေါ်ယှဉ်ပြိုင်လိုက်ပါပြီ။
ယခုဆိုလျှင် KBank ခေါ် ကက်ဆီကွန်ဘဏ် မှာ ထိုင်း၊ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် မြန်မာဘာသာတို့ဖြင့် အသုံးပြုလာနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကက်ဆီကွန်ဘဏ်ဟာ တခြား အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ တွေ အတွက်လည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်များရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေ ကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာမှု မပြုလုပ်တာကြောင့် ဘဏ်ကဏ္ဍ၊ ငွေကြေး စနစ်ကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ မပြုလုပ်နိုင်တော့တာ ရာစုနှစ် အတော်ကြာနေပါပြီ။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် အေတီအမ်စက် တောင်မရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာဘာသာဖြင့် ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေသွင်းခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ကြတော့မှာမို့ သူတို့ကိုယ်စား ၀မ်းသာကြည်နှူးမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
Posted by Burma Golf Club at 1:19 PM2comments Links to this post
၂၂နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ အထိမ်းအမှတ် ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ
အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ ရှီနာဂါဝါရပ် ဂိုတန်းဒ ပန်းခြံတွင် JAC(ဂျပန်)မှဦးဆောင်၍ ၈၈၈၈ အခမ်းအနားကို နေ့လည် ၁နာရီခွဲတွင် စတင်ပြီး ၂ နာရီခွဲတွင် စတင်ချီတက်ကြပါသည်။ ဆန္ဒပြပွဲတွင် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ဒီမိုကရေစီလိုလားသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ၊နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးများ ဂျပန်လူမျိုးများ၊ NGO အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် စုစုပေါင်းအင်းအား ၁၂၀၀ ခန့် ချီတက်ဆန္ဒပြကြပါသည်။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံအခမ်းအနားကို ညနေ ၄ နာရီတွင်အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။
Posted by Burma Golf Club at 8:17 AM2comments Links to this post
၂၂နှစ်မြောက် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ အထိမ်းအမှတ် ချီတက်ဆန...